कोभिडबारे २० जिज्ञासा र जवाफ - डा. रवीन्द्र पाण्डे Canada Nepal
कोभिडबारे २० जिज्ञासा र जवाफ - डा. रवीन्द्र पाण्डे
बैशाख १९ २०७८
काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो समय नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाभाइरस फैलिरहेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि ५ सय बढी सक्रिय संक्रमित भएका सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा पनि लगाइएको छ ।
निषेधाज्ञाबीच पनि अहिले कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमणबाट बच्न र संक्रमित भएमा के गर्ने बारे डा। रवीन्द्र पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिइरहेका छन् । यसपटक डा पाण्डेले कोभिडबारे २० जिज्ञासा र त्यसको जवाफ पनि दिएका छन् ।
- ज्वरो, खोकी, सास फेर्न गाह्रो, पखाला, बान्ता, थकान, छालामा बिमिरा आदिमध्ये केहि लक्षण मिलेमा, संक्रमितसंग भेट भएको अवस्थामा तथा कतै यात्रा गरेको अवस्थामा परीक्षण गर्नुपर्दछ । समयमै पिसिअर गरेमा रोग पत्ता लाग्छ । आफु आइसोलेसनमा बसेमा परिवारलाई संक्रमणबाट बचाउन सकिन्छ । रोग पत्ता लागेपछि गाह्रो भएमा कहाँ / के उपचार गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ । तसर्थ पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्दछ ।
- यसपटक पिसिआरबाहेक छातीको एक्सरे गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कोभिड निमोनिया देखिएमा तदनुसारको उपचार गर्दा गम्भीर अवस्था आउनबाट बचिन्छ ।
- खोप लगाएका व्यक्तिलाई पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेमा संक्रमण हुन्छ । उनीहरुको संक्रमण अन्य व्यक्तिलाई सर्न सक्छ । फरक यो छ कि खोप लगाएका व्यक्तिको गम्भीर हुने वा मृत्यु हुने दर नगण्य छ । प्रमाणित खोप जुनसुकै लगाएपनि गम्भीर हुनबाट बचाएको छ ।
- भिटामिन सी, डी र जिंक लाभदायक छन् । तर यी औषधिले कोरोना ठिक गर्दैनन् ।
- एन्टिबायोटिकले कोरोना भाइरसलाई नष्ट गर्दैन । निमोनिया भएर ब्याक्टेरियल संक्रमण भएमा मात्र उपयोगी हुन्छ । तसर्थ जथाभावी औषधि सेवन गर्नुहुँदैन ।
- गर्दैन । सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रा मिलाएर सेवन गर्दा शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने चीन, भारत, मदागास्कर, श्रीलंका आदि देशमा भएका अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् ।
- पारासिटामोल ज्वरो १०० डिग्रीको आसपास पुगेमा वा टाउको / जिउ दुखेमा मात्र सेवन गर्ने हो । नियमित सेवन गर्नुहुँदैन ।
- अक्सिमितर १२०० देखि ५ हजारसम्म पर्छ । महँगो किन्नुपर्दैन । औषधि पसल वा सर्जिकल हाउसमा यो किन्न पाइन्छ । ९५ देखि १०० यसको नर्मल भ्यालु हो ।
- घोप्टो परेर सुत्ने । यसो गर्दा अक्सिजनको स्तर बढ्छ | यति गर्दा पनि घटेन भने फोक्सोमा संक्रमण भएको बुझिन्छ । अक्सिजन ९२ बाट तल भएमा तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ । छातीको सिटि वा एक्स रे बाट फोक्सोमा निमोनिया वा संक्रमण भएको थाहा हुन्छ । यसो भएमा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार भर्ना हुने वा औषधि खानुपर्दछ ।
- सामान्य अवस्थामा चिकित्सकको निगरानीमा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्दछ । यदि सास फेर्न गाह्रो भए, अक्सिजनको मात्रा कम भए, निकै गाह्रो भए तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ । भरे वा भोलि जान्छु भन्नु हुँदैन । अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा जांच गराएपछि तपाइंको अवस्था अनुरुप चिकित्सकले उपचारको ब्यबस्था गर्छन् ।
- मास्क सस्तो, प्रभावकारी, साइड इफेक्ट नभएको तथा सर्व सुलभ छ | डबल मास्क लगाउने बानी गर्ने हो भने जुनसुकै प्रजातिको भाइरस आएपनि डर मान्नुपर्दैन ।
- सुत्केरीले मास्क लगाएर, बच्चाको बिपरित दिशामा टाउको फर्काएर तथा स्तनलाई राम्रोसंग सफा गरेर दुध चुसाउन मिल्छ । दुध चुसाउने बेला बाहेक बच्चालाई छुट्टै राख्नु राम्रो हुन्छ । सुत्केरी बस्ने कोठाको झ्याल / ढोका खुला हुनुपर्छ ।
- यसपटकको दोस्रो लहर धेरै संक्रामक भएपनि मृत्युदर कम छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेमा संक्रमण हुँदैन। संक्रमण भएमा स्वस्थ आहार, बिहार र उपचारले खतराको अवस्था हुँदैन ।
- हुँदैन ! फोक्सोमा संक्रमण / निमोनिया / पानी जम्ने आदि भएमा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । रोगको उपचारसंगै अक्सिजन लिंदा फाइदा गर्छ । अक्सिजन आफैले रोग निको गर्दैन । फोक्सोको अवस्था अनुसार अक्सिजनको मात्रा निर्धारण हुन्छ । तसर्थ अस्पताल भर्ना भएर वा निको भएर घरमा फर्के पछि सास फेर्न गाह्रो भए चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अक्सिजन लिनुपर्दछ।
- नगर्ने । हरेक व्यक्तिको अवस्था फरक फरक हुन्छ । चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधिको जथाभावी सेवन गर्दा झन् खराब अवस्था हुन्छ ।
- कोभिडको हालसम्म ठोस उपचार छैन । औषधि, अक्सिजन आदिले शरीरका अंगलाई सुरक्षित राख्ने, सजिलो बनाउने तथा भाइरसले असर गरेका अंगलाई सपोर्ट दिएर बिरामीलाई बचाउने मात्र हो ।
- मापदण्ड पालना नगरे संक्रमण हुन्छ । अहिलेको नयाँ प्रजातिको संक्रमणले गम्भीर बनाउन सक्छ ।
- बिभिन्न बैज्ञानिक परीक्षणबाट कोभिड र खोपको पुष्टि भएको छ । अनधिकृत व्यक्तिका भ्रामक कुरा सुन्नुहुँदैन । सरकारले दिने सूचना र बिज्ञका कुरा विश्वास गर्नुपर्दछ । कोरोना के हो ? भन्नको लागि अस्पतालमा छटपटाइरहेका संक्रमित हेरे स्पष्ट बुझिन्छ । खोपले काम गर्ने / नगर्ने बारे खोप लगाएका व्यक्तिको मृत्युदर हेरे थाहा हुन्छ ।
१८. लकडाउन किन, कति समय आबश्यक हुन्छ ? लकडाउन छोंटो गराउन के गर्नुपछ ?
- लकडाउन भनेको जो जहाँ छ, त्यहीं बस्ने हो । नयाँ महामारी आएमा, महामारीको कारण अस्पताल भरिएमा, नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेमा तथा सरकारले तयारी गर्नको लागि लकडाउन गरिन्छ । लकडाउन जति कडा भयो, संक्रमणको चेन त्यति छिटो तोड्न सकिन्छ ।
यसको लागि नागरिकले मापदण्ड पालना गर्ने तथा सरकारले पालना गराउनेतर्फ पुरै शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसो भएमा ३ हप्ताको लकडाउन पर्याप्त हुन्छ । लकडाउनको अबधिमा सरकारले दैनिक काम गरेर गुजारा गर्ने व्यक्तिलाई राहतको ब्यबस्था गर्नुपर्दछ । अनुशाशित नागरिक र जिम्मेवार सरकारको संयोगले लकडाउन छोंटो गर्न सकिन्छ ।
- दोस्रो लहर अझै २ – ३ महिना रहन्छ । त्यसपछि घट्दै जान्छ । महामारीबाट मुक्त हुनको लागि ७० % नागरिकले खोप लगाउनुपर्दछ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर भाइरसलाई मान्छेबाट अलग्याउनु पर्दछ ।
- यो महामारीले संसारलाई चपेटामा पारेको छ । सबैको आर्थिक, शैक्षिक, पेशागत तथा अन्य क्षेत्रमा नोक्सान पुर्याएको छ । महामारी नियन्त्रणमा आएपछि ती सबै घाटा सन्तुलनमा आउनेछन् ।अहिले जीवनरक्षा गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय हो । योग, ध्यान, प्रबचन श्रबण, संगीत, कला, साहित्य, घरको काम आदिबाट मनलाई सकारात्मक उर्जामा स्थिर राख्न सकिन्छ । तनाब दिने खालका कुरा नसुन्ने / नहेर्ने तथा मनमा कोरोना मात्र बोकेर नहिड्ने हो भने चिन्ताले अस्वस्थ हुने अवस्था उत्पन्न हुँदैन।
बैशाख १९, २०७८ आइतवार १२:३४:३८ बजे : प्रकाशित
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरकाे कटाक्ष– अब नेपाली सैनिककाे "जिजस" दल "मेरि" दल हुनेछ
मनमा लागेको र भोगेको देखेको कुरा भन्दैछु । हजुरहरु कसैको सन्दर्भ मिल्न गएको भए माफी पाउँ । गाली खान्छु त्यो पनि थाहा छ ।
राजनीतिमा अलि सचेत भएको भनेको ४६ सालको आन्दोलनदेखि हो ! त्यो पनि पल्लो घरको अगाडि साथीलाई भेटेर घर फर्कंदै गरेका दाइलाई सुरक्षाकर्मीले पिटि पिटि मारेका थिये त्यो देखेर ।
त्यो दाइले पर्खाल चढ्ने निकै कोशिश गर्नु भएको रहेछ ! पर्खालमा उम्रेको बनस्पतिको डोब त्यो बाटो हिँड्दा एक्छिन टोलाएर हेर्ने गर्थें र सोच्थे त्यो अन्तिम अवस्थामा उनको मनोदशा कस्तो थियो होला ।
फेरि सुरु भयो जनआन्दोलन ।
बग्रेल्ती डाडाँ ढाकिने गरि छरपस्ट मृत मानव शरीरहरु टेलिभिजनमा हेर्दा बिहान बिहान खाली पेटमा भएको तरल पदर्थ र आँसु एकै पटक निस्किन्थयो ।
त्यसपछि त के के हो के के ?
दरबार हत्याकाण्ड ।
त्यतिबेला सम्म पनि नेपाली समाजमा भाइचारा र एकाअर्काको धर्म संस्कृतिप्रति सम्मान थियो । पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा "चार जात छत्तीस वर्ण "
हिन्दु ,बुद्धिस्ट, मुस्लिम , किँरात ,डोम, शिख सबैले सबैको सम्मान गर्थे । पछि क्रिश्चियन आयो तर हाम्रो निधारमा लगाउने रातो गौरवको टिकालाइ घृणा गर्‍याे ।
हाम्रो देवतालाई ढुङ्गा भन्यो ।
हामी पञ्चतत्व पूजक हौँ , प्रकृति पूजक हौ।
"धर्म निरिपेक्ष " त्यो पनि ठिकै भयो सबैको आस्थाको सम्मान भयो । तर अब नयाँ कुरा सुरु भयो !
मौलिक धर्म मानेर बस्नेहरुलाई समस्या दिन थालियो ।
२० वर्ष जति भयो ।
अब हुँदा हुँदा डमरू र त्रिशूल किन नेपाली सेनाको चिन्ह भन्ने कुरा आयो ।
भैरव , काली , शिव , गणेश , किन "गण " हरु को नाम राख्ने भन्ने कुरा आयो ।
व्यवस्था परिवर्तन भयो ।
भएपछी रोएल नेपाल भनिएकाहरु हटाउ । तर हाम्रो आस्था मानिएका ठाउँहरु किन हटाउने ?
जसरी तिम्रो आस्थालाई गाली गर्दा चोट लाग्छ त्यस्तै हामीलाई पनि हुन्छ होलानी ।
अहिलेको अवस्थामा २०११ को जनगणना आनुसार हिन्दुको प्रतिशत ८० प्रतिशत माथि छ ।
हिन्दु धर्म शास्त्र अनुसार सहनु धर्महो भन्ने मान्यता छ । तर हेर्नू होला अबको दुईवटा जनगणना पछि हिन्दुको संख्या ८ प्रतिशत हुनेछ ।
हाम्रो आर्मी दलको नाम " जिजस " दल "मेरि" दल हुनेछ । ( though I respect them because they are somebody’s faith )
मन्दिरहरु १००० वर्ष पछि पुरातत्त्व बिभागले खोज्नुपर्ने हुनेछ । यो नेपालको मौलिकता ,कथा काहानीमा खोज्नुपर्ने हुनेछ ।
नेपाल भन्ने एउटा देश थियो जुन स्वतन्त्र थियो ,स्वर्ग थियो तर त्यहाँका नेताहरुको कारण आफ्नो अस्तित्व गुमाउन बाध्य भयो ।
म यो अस्तव्यस्त अवस्थाका कारण यो सोच्न बाध्य भए ।
आशा छ ८० प्रतिशत हिन्दुहरुलाई यो सब सहन सक्ने साहस भगवान पशुपति नाथ ले प्रदान गर्नेछन् ! हर हर महादेव
( याे अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरकाे निजी विचार हाे– सं.)
जेठ २८, २०७८ शुक्रवार २१:१४:३९ बजे : प्रकाशित
‘बारम्बार संविधान मिच्दा प्रधानमन्त्रीलाई लज्जा र गल्तीबोध हुँदैन ?’
नारायण गाउँले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी, देश, राजनीति र सिस्टमलाई नमिठो मजाक बनाउनुभो । देशको प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले नै पटकपटक संविधान–मिचाहा भनेर फैसला गरिरहँदा पनि तपाईंलाई अलिकति लज्जा र थोरै गल्तीबोध हुँदैन ?
राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेशप्रमुख, निर्वाचन आयोग, अख्तियारदेखि अदालतजस्ता संस्था लोकतन्त्रका खम्बा हुन्, एकपल्ट हेर्नु त तिनको हबिगत । तपाईंले संविधान नै हेपेर नियुक्त गरेका मन्त्रीको अनुहार, इज्जत र योग्यता त के भन्नु र ।
सोच्नुस् त, नागरिकताजस्तो दीर्घकालीन र संवेदनशील कानुनलाई समेत सत्ता बार्गेनिङ्गको साधन बनाउनु र अध्यादेशबाटै लागू गर्न खोज्नु हदैसम्मको राजनैतिक बेइमानी होइन ? दुई तिहाइको सरकारले संसदबाट सुरुको सत्रमै पार लगाउनुपर्ने कानुन होइन त्यो ? आज काम चलाऊ सरकारले त्यस्तो गम्भीर मुद्दामा अध्यादेश ल्याउने ? अनि हिजो काम चलाऊ सरकारले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नेदेखि दीर्घकालीन मुद्दामा निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने तपाईं नै होइन ?
ओलीजी, जनताले नै चुनेको संसद गलत, अदालत गलत, अन्य पार्टीहरू गलत, सँगै मिलेर चुनाव लडेको पार्टी गलत, आफ्नै पार्टीका नेता गलत, पत्रकारहरू गलत र ओलीमात्रै सही भन्ने भाष्यले कतिसम्म काम गर्ला र ? संसार नै छक्क पर्ने विकासको जिम्मामात्रै आफूले लिने र यो निर्लज्ज राजनैतिक बेथितिको जिम्मा सप्पै अरूको काँधमा तेर्स्याएर मात्रै होला र ?
अब उपप्रधानमन्त्री महतोदेखि परराष्ट्रमन्त्रीसम्मले गरेको निर्णय र परिपत्र के हुन्छ ? भव्य शपथदेखि स्वागतसम्मका खर्च र समयको जिम्मा कसले लिन्छ ? त्यसअघिका बादललगायतका मन्त्रीहरूको निर्णय के भयो ? अब कर्मचारीले मन्त्रीहरूको निर्णय टेर्ने कि नटेर्ने ? पूर्वमन्त्रीको रूपमा तिनको खर्च राज्यकोषले बेहोर्ने कि नबेहोर्ने ?
एउटा नागरिकले एक दिन ढिलो कर तिर्दा या सामान्य नियम मिच्दा जरिवाना लिनुहुन्छ । तपाईंले नियतवश नै बारम्बार संविधान मिच्दा कुनै जरीबाना लाग्दैन ?
आषाढ ९, २०७८ बुधवार १२:४२:३५ बजे : प्रकाशित
# नारायण गाउँले
शान्ता चौधरीको नेता नेपाललाई खुलापत्र– प्रधानमन्त्री बनाइदिने कांग्रेसले देखाएको सपनामा फस्नुभयो
आदरणीय कमरेड माधव नेपाल
हार्दिक अभिवादन ।
नेकपा (एमाले ) को तपाईं आदरणीय नेता हुनुहुन्थ्यो, श्रद्धेय हुनुहुन्थ्यो । हेर्दाहेर्दै यति ठुलो बिचलन तपाईंमा देख्न प¥यो । फँस्नु भयो कमरेड, फँस्नु भयो तपाईं । निस्कनै नसक्ने गरि कांग्रेसको जालमा पर्नुभयो ।
शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसपछि पार्टी विभाजन गर्न सजिलो पर्ने गरि शेरबहादुरले अध्यादेश ल्याइदिने, अनि तपाईंले पार्टी विभाजन गरिदिने, चुनावी सरकारको नेतृत्व तपाईंले गर्ने, आगामी निर्वाचनमा तपाईंलाई कांग्रेसले जिताईदिने, चुनावी गठबन्धन गर्ने, कांग्रेसले तपाईंलाई एमालेभन्दा ठुलो पार्टी बनाई दिने, वा कमरेड वा तपाईं सपना ।
यो स्ट्याटस सुरक्षित होस्, साथीहरु स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस, पछि मलाई देखाउनु होस्, म चुनौती दिन्छु । निर्वाचनपछि तपाईं त्यहीँ पुग्नुहुन्छ जहाँ आज सिपी मैनाली छन् ।
कांग्रेसलाई आफैंभित्र सकस हुनेछ, आफ्नै पार्टीभित्रको गुटकालागि टिकट को भागबन्डा मिलाएर बितरण गर्न उसलाई आफँैलाई सकस हुनेछ ।
तपाईंको पार्टीलाई कांग्रेसले भाग छुट्याई दिने, प्रचण्डलाई छुट्याईदिने, बाबुराम उपेन्द्रलाइ छुट्याएर दिने अनि कांग्रेसका मतदाताले तपाईंहरुलाई भोट दिएर जिताई दिने, वा कमरेड वा तपाईंको दिवा सपना । राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन जस्तै ठान्नु भयो की क्याहो कमरेडले । कमरेडको राजनीति हेर्दाहेर्दै कांग्रेसको शरणमा .. भो कमरेड भो , पतनको बाटो नजानुहोस् ।
आषाढ १४, २०७८ सोमवार १६:११:५८ बजे : प्रकाशित
# शान्ता चौधरी
'आज के पि ओली दुःखित होलान्, आगामि दिनमा अरू धेरैले दुःख पाउने निश्चित छ '
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा - नेपालको संविधान २०७२ मा रहेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता प्रति हाम्रो असहमति रहेको तथ्य सर्वविदित छ । तथापि यस संविधानमा संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त, समावेशी मान्यता, आवधिक निर्वाचन, जनताको अभिमतबाट सबै विषय परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान, मानव अधिकार र जनताको सर्वोच्चता जस्ता विषयहरू समेटिएका हुँदा हामीले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने तथा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्वन गरेका हौँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि रिट निवेदनका वारेमा आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र परमादेशले संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली र शक्ति पृथकिकरणको मान्यता माथि गम्भीर प्रहार भएको छ ।
आजको फैसलाले के पि ओलीको ज्यादतिबाट पिडितहरूलाई तत्कालको निम्ति केही राहत मिलेको होला । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेहरूलाई केही सुविधा वा लाभ पनि प्राप्त होला । तर, यो फैसलाले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी नकरात्मक प्रभाव पारी रहने निश्चित छ । आज के पि ओली दुःखित होलान्, आगामि दिनमा अरू धेरैले दुःख पाउने निश्चित छ ।
बिशेष गरी संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोग गर्दा सांसदहरू माथी दलको नियन्त्रण नहरने सर्वोच्च् अदालतको फैसला अत्यन्त घातक छ र यसले भविष्यमा दलहरूको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने छ ।
हामीले अवलम्वन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण आमचुनावमा साधारणतया कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने संभावना अत्यन्त कम छ । त्यस्तो अवस्थामा धारा ७६(५) को प्रयोग बारम्बार गर्नु पर्ने हुन्छ । सांसदहरू स्वतन्त्र र दलविहिन हुन पाउने भएपछि पार्टीको एकता र अनुशासन कसरी कायम गर्ने ? एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले म आफैपनि अत्यन्त चिन्तित भएको छु ।
पार्टीको टिकटमा, पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा र पार्टीको सहयोगबाट चुनाव जित्ने अनि सरकार बन्ने बनाउने बेला दलको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र हैसियतमा निर्णय गर्न पाउने कस्तो परम्परा हामी कायम गर्न खोजि रहेका छौँ ? एउटै पार्टीका केही सांसद सत्तापक्ष अनि केही प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था कस्तो संसदीय प्रजातन्त्र बनाउन खोजि रहेका छौँ ? आज अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्नेहरूले पनि एकपटक गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने भएको छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रि बनाउने क्रममा नेकपा(एमाले) र जसपा जस्ता पार्टीहरू त सग्लो रहन सकेनन् भने आगामि दिनमा यही नियति आज उत्सव मनाउने नेपाली कांग्रेस वा नेकपा (माओवादी) भोग्नु पर्दैन भन्ने के ग्यारेण्टि छ ?
अर्काका पार्टी फुटाएर, अरू नै प्रयोजनको निम्ति संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर, अपवित्र गठवन्धन बनाएर गरिएको दाविलाई सनाखत वा संसदमा परिक्षण नै नगराई ठाडो आदेशबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्ति गर्न परमादेश दिनुले राजनीतिमा गलत नजिर र परम्परा कायम हुन गएको छ ।
बुढी वा बुढा मरे भन्ने भन्दा पनि काल पल्कने खतरा टडकारो देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले देशमा अस्थिरता र अराजकताको श्रृंखला कायम भयो भने भोलीका दिनमा राजनीतिककर्मी मात्र होईन स्वयं न्यायमूर्तिहरू र न्यायालय पनि जिम्मेवार ठहरिने छ ।
‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता, देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा’
आषाढ २८, २०७८ सोमवार २१:४९:४४ बजे : प्रकाशित
खोप सम्बन्धि जिज्ञासा : खोप लगाउनुपूर्व तथा लगाएपछि के गर्ने ? दीर्घरोगीले खोप लगाउने कि नलगाउने ?
काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण घट्दै गइरहेको छ । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएपछि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि दशका विभिन्न स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ । यस्तै चीनबाट आएको भेरोसेल र अमेरिकाबाट आएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप पनि देशभर लगाइदैछ ।
यसैबीच डा. रवीन्द्र पाण्डेले खोप सम्बन्धि विभिन्न जिज्ञासाबारे बताएका छन् । उनले चीनको भेरोसिल र जोन्सनको खोपमध्ये कुन लगाउने ? पहिलो मात्रा कोभिशिल्ड लगाएका व्यक्तिले दोस्रो मात्रा कुन लगाउने ? लगायतका विभिन्न प्रश्नको उत्तर दिएका छन् ।
१. कुन खोप लगाउने ?
- कोरोना भाइरसविरुद्ध स्वीकृति प्राप्त तथा सरकारले तोके बमोजिम जुन खोप लगाएपनि काम गर्छ । हामीकहाँ छनोटको अवसर सिमित भएको हुँदा जुन उपलब्ध छ, त्यहि लगाउनु राम्रो हुन्छ ।
२. पहिलो मात्रा कोभिशिल्ड लगाएका व्यक्तिले दोस्रो मात्रा कुन लगाउने ?
- पहिलो मात्रा जुन खोप लगायो, दोस्रोमात्रा त्यहि खोप लगाउनु राम्रो हुन्छ । कोभिशिल्ड एस्ट्रेजेनेकाको उत्पादन हो । जापानले नेपाललाई प्रदान गर्ने १६ लाख खोप पनि एस्ट्रेजेनेकाको खोप हो । तसर्थ केहि दिन पर्खेर जापानले दिने खोप लगाउनु राम्रो हुन्छ । एस्ट्रेजेनेकाको पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्तिले दोस्रो मात्रा मोडेर्ना वा फाइजरको खोप लगाउँदा फाइदा हुने जनाइएको छ । हामीकहाँ मोडेर्ना र फाइजरको खोप उपलब्ध छैन । तसर्थ चीनको भेरोसिल वा अमेरिकी जोन्सन एण्ड जोन्सनसंग मिक्सम्याच नगर्नु राम्रो हुन्छ ।
३. दीर्घरोगीले खोप लगाउने कि नलगाउने ?
- कोभिडबाट दीर्घबिरामीलाई बढी जोखिम हुने भएकोले दीर्घबिरामीले खोप लगाउनु सुरक्षित हुन्छ । आफ्नो रोग तथा औषधिको बारे आफ्नो चिकित्सक वा खोप केन्द्रमा सल्लाह गरेर लगाउनु थप सुरक्षित हुन्छ ।
४. चीनको भेरोसिल र जोन्सनको खोपमध्ये कुन लगाउने ?
- सरकारले तोके बमोजिमका उमेर र समुहले तोके बमोजिमको खोप लगाउने।
५. अमेरिकामा जोन्सनको खोप किन कम लगाइएको छ ?
- अमेरिका लगायत बिकसित देशमा खोप छनोटका धेरै बिकल्प छन् । तसर्थ उनीहरुले आफ्नो छनोट अनुसार फाइजर, मोडेर्ना, जोन्सन, एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाएका छन् । हामीकहाँ त्यो सुबिधा छैन । त्यस्तै जोन्सनको खोप लगाउँदा अमेरिकामा दशौँ लाखमा ६ जनालाई रगत जम्ने समस्या देखिएकोले फाइजर र मोडेर्नामा बढी आकर्षण छ ।
६. नेपालमा उपलब्ध खोप कसले लगाउन मिल्दैन ?
- १८ बर्षमुनिका युवा / बालबालिकाले ।
- कोभिड खोप वा खोपका घटकको एलर्जी भएका व्यक्तिले।
- ज्वरो आएका व्यक्तिले ।
- कोभिड लागेका ( निको नभएका ) व्यक्तिले ।
- रगत जम्ने समस्या भएका व्यक्तिले ।
७. कसले साबधानीपूर्वक लगाउनु पर्दछ ?
- गर्भवती तथा ६ महिनाभन्दा कम उमेर भएका शिशुका आमाले ( फाइदाभन्दा जोखिम बढी भएमा सम्बन्धित चिकित्सकको निगरानीमा लगाउन मिल्छ )।
८. खोप लगाउनुपूर्व तथा लगाएपछि के गर्ने ?
- सकभर खाना तथा पानी खाएर, भौतिक दुरी कायम गरेर खोप लगाउने । खोप लगाएपछि आधा घण्टा खोप केन्द्रमा बस्ने । कुनै समस्या भए तुरुन्त अस्पताल जाने । ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, जाडो हुने लगायतका लक्षण केहि दिनमा ठिक हुन्छन् ।
९. खोप सबैले नपाउने अवस्थामा के गर्ने ?
- खोपको उपलब्धतासंगै सरकारले उमेर समुह निर्धारण गर्दछ । तसर्थ आफ्नो पालोमा मात्र लगाउने ।
१०. बालबालिकाले कहिले लगाउने ?
- बालबालिकामा खोपको ट्र्याल बिभिन्न देशमा भइरहेको छ । केहि महिनामा धेरै खोपले बालबालिकाको लागि खोप बिकास गर्नेछन । त्यो बेलासम्म खोप लगाएका / नलगाएका / बालबालिका सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने ।
आषाढ ३१, २०७८ बिहिवार ११:१०:११ बजे : प्रकाशित
# कोरोनाविरुद्धको खोप
महामारी, आर्थिक असुरक्षा र समाधान – डा. रवीन्द्र पाण्डे
विश्वभर नै कोरोना महामारीको कारण चिन्ता, तनाव, डर लगायत मनोबैज्ञानिक समस्या बढेका छन् । यी मध्ये सबैभन्दा ठूलो आर्थिक असुरक्षा हो । बेरोजगार हुनु, ब्यबसायबाट बिस्थापित हुनु, निम्न ज्यालामा काम गर्नु, कुनै पनि समय कामबाट हट्नुपर्ने अवस्था हुनु, बालबालिकाको स्कुलको फिस तिर्न अप्ठ्यारो हुनु लगायतका समस्या हुँदा खाने बर्गमा छ भने हुनेखाने बर्गमा त्यो भन्दा ठूलो समस्या देखिएका छन् ।
आफ्नो ब्यबसाय ऋणात्मक हुनु, महँगो भाडा तथा स्टाफ खर्च हुनु, कमाइ नहुनु, घरजग्गा भएपनि नगद नहुँदा जीवनयापनमा समस्या देख्नु, त्यसको कारण चिन्ता, तनाब तथा फ्रस्ट्रेसन हुनु र भविष्यमा पहिलेजस्तै कमाइ हुने कुरामा विश्वास नलाग्नु तथा भबिष्यप्रति आशाबादी नहुने लगायतका मनोबैज्ञानिक समस्या देखापरेका छन् ।
दैनिक काम गरेर खाने ठूलो जनसंख्या लकडाउन हुन्छ कि भनेर त्रासमा रहेका छन् । लकडाउन भयो भने के खाने ? कसरी परिवार पाल्ने ? केटाकेटीको फि कसरी तिर्ने ? बिरामी भए कसरी उपचार गर्ने ? भाडा कसरी तिर्ने ? लगायतका चिन्ता धेरैजनामा छ ।
धेरै देशमा फैलिएको तेस्रो लहर, कोरियामा आएको चौथो लहर तथा इरानमा देखिएको पाँचौं लहरको कारण यो महामारी सधै रहने हो कि भन्ने चिन्ता हरेक बर्गमा बिध्यामान छ। बिकसित देशमा लकडाउन भएपनि राज्यले जीविका, पढाइ तथा उपचारको ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । हाम्रो सामाजिक असुरक्षा भएको देशमा लकडाउन हुँदा पनि ‘ सेल्फी राहत ‘ बाहेक केहि प्राप्त नहुने हुँदा चिन्ताको ग्राफ उकालो लागिरहेको हो ।
महामारीको अबधिमा सरकारले स्थानीय निकायबाट हुँदा खाने बर्गलाई कम्तिमा महिनाको ५० किलो चामल, ५ किलो दाल, १० हजार नगद, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गर्ने हो भने यो अवस्था आउने थिएन ।अहिले जुन बजेट बालुवामा खन्याइएको छ, त्यसलाई ब्यबस्थापन गर्ने हो भने राहत दिन सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। यसमा सरकार जनताप्रति जिम्मेवार भए पुग्छ ।
हामी आम नागरिकले यी तथ्य आत्मसात गर्नु जरुरी छ –
- हरेक कुराको आयु हुन्छ । यो महामारीको पनि आयु छ । १-२ बर्षपछि महामारी सकिन्छ ।
- खोप अभियान चलिरहेको छ। खोप लगाएपछि अपवाद बाहेक कोभिड सरेपनि गम्भीर हुने / मृत्यु हुने हुँदैन ।
- छिमेकी देश तथा अन्य देशमा खोप अभियान तीब्र छ । त्यहाँबाट नेपाल आउने व्यक्ति खोप लगाएर आउँछन् । जसको कारण पहिले जस्तो संक्रमण सर्दैन ।
- दोस्रो लहरमा लाखौँ व्यक्ति संक्रमण भएका छन् । ती मध्ये धेरैलाई थाहा नभई कोरोना निको भएर एन्टिबोडी बिकास भएको छ । खोप लगाएका तीसौं लाख व्यक्तिमा पनि एन्टिबोडी बिकास भएको छ । यी व्यक्तिलाई कोभिड लागेपनि सामान्य रुपमा निको हुन्छ ।
- दोस्रो लहरमा हाम्रा स्वास्थ्य संरचना धेरै बलिया भएका छन्। अक्सिजन नपाएर मृत्यु हुने अवस्था अब हुने छैन ।
- मास्क, भौतिक दुरी र हातको सफाइमा ध्यान दिए संक्रमण सर्दैन।
- महामारीको समयमा अनपेक्षित कुरा धेरै हुन्छन् । बिकसित देशमा पनि हाम्रो देशमा भन्दा धेरै व्यक्तिको निधन भएको छ । तसर्थ जहाँ बसेपनि जोखिम हुनसक्छ ।
- अर्को बर्षदेखि खोपको कारण कोरोना सामान्य रुघाखोकीजस्तो हुनसक्छ।
- त्यसपछि हाम्रो काम, कमाइ तथा आर्थिक गतिबिधि पहिलेभन्दा सुदृध हुन्छ । हामीले मेहेनत गर्यौं भने यो महामारीमा भएको घाटा ६ महिनामै हट्नेछ । त्यसपछि हामीले पहिलेभन्दा उन्नत जीवन पाउनेछौं ।
- महामारीले संसारमै हरेक मानिसलाई घर वा आफ्नो देशमा कैद गरेको छ । महामारी कमजोर भएपछि भ्रमणमा निस्किने लहर चल्छ | हाम्रो देशमा पनि लाखौँ पर्यटक आउँछन् । पर्यटन क्षेत्र बलियो हुँदा रोजगारी तथा कमाइ बढ्छ ।
- अहिले कमाइ कम भएको हुँदा हाम्रो क्रय शक्ति कम भएको छ। १ बर्षपछि हाम्रो रोजगारी तथा ब्यबसाय चल्नेछ | आम नागरिकको कमाइ भएपछि खर्च गर्नेछन । त्यसपछि हाम्रा हरेक ब्यबसाय चल्नेछन् ।
- कोठामै कैद भएर अनलाइन पढ्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।
- विद्यार्थीको लागि बिदेशमा पढ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
- धेरै देशलाई कामदारको खाँचो पर्नेछ । तसर्थ बैदेशिक रोजगारी बढ्नेछ ।
- महामारीले कृषि, पशुपालन आदिलाई राम्रो पेशाको रुपमा चिनाएको छ । लाखौँ युवा आफ्नै देशमा स्वरोजगारमा लाग्नेछन् ।
- नागरिकको कमाइ भएपछि बन्द भएका ब्यबसाय पहिलेभन्दा राम्रोसंग चल्नेछन् ।
- यो समयमा हामीले उच्च मनोबलको साथ जीवन संचालन गर्न सक्यौं भने अर्को बर्षदेखि हाम्रा तनाब, चिन्ता तथा असुरक्षा हट्नेछन् । त्यो बेलासम्म हामी सुरक्षित, धैर्य तथा आशाबादी हुनु जरुरी छ ।
- अन्त्यमा, सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाइ गरोस्, खोप भटाभट लगाओस् । तर लकडाउन नगरोस् । लकडाउन गर्ने परिस्थिति रोक्ने काम अहिलेदेखि गरोस् । राहत, सहुलियत र छुटजस्ता नागरिक प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गरोस् । आर्थिक असुरक्षाको चिन्ता हटाउने कार्यक्रम तुरुन्त लागु गरोस् ।डा. रवीन्द्र पाण्डे
भाद्र ७, २०७८ सोमवार ११:०४:४८ बजे : प्रकाशित